Mumwe Murimi weChichena Anouraiwa kuBanket
Gunyana 15, 2011
Va Nicolson vanga vari murimi ane mukurumbira kuRafingora. Vakatorerwa purazi ravo paibvutwa minda nechisimba nevaimbova varwiri verusununguko, vachibva vaenda ku Democratic Republic of Congo
Mumwe murimi wechichena akaurayiwa neChipiri ku Banket, mudunhu reMashonaland West. VaKeith Nicolson, vanoita nhengo yechipiri yesangano re Commercial Farmers Union of Zimbabwe, CFU, kuurayiwa mwedzi uno.
Va Nicolson vanonzi vakapfurwa ndokufa apo vaiedza kubatsira muvakidzani wavo ainga apambwa nevanhu vaiva nepfuti nemusi weChipiri.
Va Nicolson vanga vari murimi ane mukurumbira kuRafingora. Vakatorerwa purazi ravo paibvutwa minda nechisimba nevaimbova varwiri verusununguko, vachibva vaenda ku Democratic Republic of Congo.
Vanga vasina nguva huru vadzoka muZimbabwe kunoita mudyandigere. Mutungamiri we CFU, Va Charles Taff vati mumwezve murime Va Collin Zietsman, vakaurayiwa nematsotsi kumba kwavo ku Centenary kutanga kwemwedzi uno.
Mumwezve murimi anonzi ari muchipatara ku Headlands mushure mekurohwa nevanhu vasingazivikanwi.
Mutauriri we mapurisa ku Mashonaland West, Va Clemence Mabweazara, vakaudza bepanhau re Herald kuti mapurisa ari kutsvaga mbavha idzo vari kuti ndidzo dziri kuita mabasa aya ekuuraya varimi.
Va Rejoice Ngwenya vanoongorora zvematongerwe enyika. Va Ngwenya vati hurumende inofanira kuona kuti mitemo yenyika yashandiswa kudzivirira vanhu vese munyika kubva kune vari kuita madiro kuuraya zvinosiririsa nekubira varimi nevamwe vanhu.